TradeFred i forex lwehlabathi kwi-intanethi kunye CFD platform trading. Ingcali ukuhlanganiswa wethu zemali kunye nomthengi ubuchule nenkxaso iqinisekisa sinako Ndingakunika amava utyalo-mali ezilungiselelwe style utyalo-mali lwakho ngabanye. Silwela ukugcina isikhundla sethu njenge gama wakholosa kolu shishino, enkosi indlela zethu zokuziphatha nomthengi ebomini.
Yini na ukuba ujoyina TradeFred?
– Iklasi yokuqala amava trading, kuquka kwanda emnxinwa kuphela 0.1 iipete.
– imithombo Ingcaphephe eyenzelwe ukuqulunqa isicwangciso yakho yorhwebo eliphezulu.
– Vula ezintsha zokurhweba ngaphandle iimvakalelo zabantu ophazamisayo.
– unikezelo olukhawulezayo kuzo imali yakho usuku nje omnye ngaphesheya indlela ekuhlawuliswa ezininzi.
– urhwebo superior, processing oda uthembeke kwaye likhawulezise.
– akhawunti yotyalo demo Unlimited ezinelayibrari lobutyebi uqeqesho.
– asethi Client agcinwe kwimigangatho yokuqala-class, ezahlukeneyo ngokupheleleyo imali yethu.
– Umphathi akhawunti abazinikeleyo iilwimi amaqela yoncedo lwabathengi.
– Qala bethengisa forex kunye CFDs nge investment eliphantsi kokuqala kuphela $ 250.
New ukuba David? Funda lokuthengisa ngathi pro kwaye uqale uhambo lwakho utyalomali akukho xesha nakanye.
Musa ukuba izinto zexabiso. Konga ixesha nemali nala izixhobo FREE evela TradeFred Academy:
Products TradeFred kaThixo:
TradeFred igxile urhwebo forex kunye CFDs. Zingasebenza a ngaphezu uluhlu elaneleyo iimarike, cishe 50 ngababini lwemali oluqukwe kwicandelo FX kuphela.
Ukubulawa Forex urhwebo kuyacaca mkhulu, kwaye lo gama site inika endlala nokhuphiswano kakhulu, simele ambonise ukuba TradeFreds endlala ayinakutshintshwa. Izinga liphezulu linokufikelelwa ngababini forex yi 1:50.
Eli candelo stock has a “uphumezo kumnandi” nesithandwa kunye kwanda kakhulu kuchaphazeleke ebanzi kwimarike. Izinga eliphezulu le didi mveliso kuphela 1:10.
-Indices ingxenye lugubungela neemarike ukusuka 6 amazwekazi kwaye inikeza endlala zokhuphiswano. Izinga eliphezulu kwakhona ezisezantsi kancinane kolu didi: Wabekwa ukuba 1:25.
amatye anqabileyo njengegolide, isiliva platinum zisoloko ithandwa kunye nabarhwebi. at TradeFred, abasebenzisi bancama iintsimbi ezifana ne endlala elungileyo kunye eqhinga eliphezulu 1:25.
Njengalo naluphi na labarhwebi lokwenene ezaziwayo, TradeFred isebenzisa MT4 njengoko ngundoqo nendawo yaso wokudla. Eli qonga kakhulu ezinamandla ezinikezelwa yi TradeFred nguye MT4 Desktop Trader, leyo iza yohambelwano epheleleyo kwezisombululo yatshati MT4 kunye nezixhobo uhlalutyo technical.
Imizobo ingabonakaliswa kunye uluhlu khorwisaka amaxesha, ungenziwa ngemfuneko, ifakwa igrafu asindiswe ukuze abarhwebi sisebenzisa kamva. Ke ukuba uhlalutyo technical, ngayo 50 Iimpawu ngaBasebenzi bePri-efakwe kunye neqonga. Kanjalo, Abarhwebi Ungakhetha ukufaka izalathi nangakumbi ukuba athenge okanye ukuthenga for free. Abasebenzisi kwakhona ukudala izalathi ezabo.
Omnye amandla MT4 ukuba iyame EAs (Expert Advisors) ukuba Abarhwebi bangasebenzisa i yorhwebo oluzenzekelayo. Ukwengeza, TradeFreds MT4 kwenza yokurhweba Forex kunye CFDs kwi enye kwikhusi kwaye inika ukhathalelo ingcali zabaxhamli ukufikelela uhlalutyo kwimarike lobungcaphephe kunye nezinto zokufundisa.
MT4 efumaneka simahla ukusuka website TradeFred.
TradeFred Iintlobo akhawunti:
TradeFred inika ingxelo demo lokuposa evumela abarhwebi ukuba athathe iqonga kwi uvavanyo spin ingozi-free. Le akhawunti demo ibandakanya $ 10,000 kwiingxowa virtual kunye kakhulu ngezinto zokufundisa. Le akhawunti kusetyenziswa 14 iintsuku, ngoko ephela nje.
Le akhawunti Basic isenokuba ukhetho best kwabasaqalayo. Ophantsi wediposithi efunekayo kule akhawunti kuphela $ 260 kwaye eqhinga obukhulu 1:50. Le akhawunti umphathi abazinikeleyo ngokunjalo notsalo usuku.
I-akhawunti standard zikwafumaneka nakwi kubathengisi ezininzi, abaqalayo kunye kubasebenzisi abaphambili. Ophantsi wediposithi efunekayo $ 500, kwaye izinga eliphezulu nako 1:50. Olona phawu ezongezelelweyo kuphela akhawunti Standard angaphezu sentsusa uhlalutyo lwemarike le inikeza.
Le akhawunti eyandisiweyo kufuna idiphozithi ubuncinane $ 1,000. Iimeko urhwebo nalabo zikhankanywe ngasentla, kodwa ngxelo iqulethe imiqondiso yorhwebo kusiwa ngqo Pop yabathengisi.
Nge idiphozithi ubuncinane $ 5,000, umdlalo for akhawunti pro kukuba kude yabarhwebi. Uhlalutyo Market inceda abaxumi abawela kolu didi lwe akhawunti, kunye kwanda liba ngenxa abarhwebi pro-akhawunti.
Le akhawunti premium phaya phezulu ebhodini: ophantsi wediposithi yi $ 10,000. Nangona iimeko zorhwebo ubukhulu becala ezi ndlela ingentla, le akhawunti kubaluleke akhawunti zero-tshintshanisa.
TradeFred iyazidla ukusebenza iqonga yotyalo-phambili ehlabathini – MetaTrader 4. Kule vidiyo, siya kuchaza indlela yokusebenzisa eqongeni kunye iimpawu ezisisiseko ezifumaneka.
Kuqinise ULWAZI David WITH Imiqondiso FREE *
Kutheni ukuhlawulela Imiqondiso ezibizayo xa Ungazifumana FREE?
Ungaphoswa ithuba lakho. Dibanisa TradeFred ukuba ibango
amaza akho nokuphucula izakhono zakho zotyalo-mali.